Parenting Archives - Page 4 of 4 - Daryeel Magazine
Parenting	Si Aad U Dhisto Tarbiyada Caruurtaada Fuli 10-kaan Qodob
Marka laga hadlayo in la hagaajiyo ama la toosiyo hab dhaqanka caruurta waxa lagama maarmaan ah in la maro habab ama dariiqooyinka lagu gaadhi karo sidii caruurtu u noqon lahayd qaar akhlaaq ahaan iyo aqoon ahaanba u dhisan. Hadaba si aad u gaadho guulo kamid ah tarbiyaynta caruurta waxa aad fulisaa qodobadan hoos ku qoran. 1. ilaa uu ilmahaagu 10-jirsanayo …
Waxaa jirta in la yiraahdo qofkas waa caasi waalid micnaha ma xushmeyo sificama ulama dhaqmo labadi dhashay ama midkod badana aabaha. Taasi waxa ay sabab u noqon kartaa in u xumado xiriirki ka dhaxeyay walidka iyo wuxu dhalay laakiin Somali hadaynu nahay waxaan mar walba dusha ka saarna ubadka la dhalay in ay iyagu xunyihiin. Dib u raacid hadi la …
Barbaarinta carruurta. Waa maxay barbaarin? Barbaarintu waa in shay si tartiib tartiib ah loo kordhiyo (badiyo) illaa la gaarsiiyo dhammaystirnaan ( heerka ugu sarreeya). Haddaan ka eegno dhanka barbaarinta ubadka waa in ilmaha saddex meelood oo go’aaminaya hab_dhaqankiisa si isu dheelli tiran looga koriyo illaa meesha ugu sarraysa ee suura gala la gaarsiinayo; 1. Waa in laga koriyaa ilmaha jirka …
Sababaha Keena Madax Adeega Caruurta & Sidaad Ula Dhaqmi Lahayd
Sidee Ayaan Ula DHaqmeynaa Caruurta Madax Adag?!. Ugu horeyntii, Ilaah ayaa mahad iska leh, Nabigeena naxariis iyo nabadgalyo korkiisa ha ahaato (NNKH). Intaas kadib, su’aalaha u baahan in la fahmaa waxey tahay waa maxay madax adag? Maxaa keena sideese loola dhaqmi karaa? Madax adeygu ma aha ilmuhu marka ay yaryihiin kaliya, balse kuwa waa weyba waa yeelan karaan, haddaba madax …
8 Hab Oo Aad Si Fiican Oo Cilmi Ah Ugu Kobcin Karto Fariidnimada Ilmahaaga
Si aad maskaxda iyo shakhsiyadda ilmahaaga u dhisto ugana dhigto mid xoogganm garaadkiisana aad u kobciso si sax ah waxa uu Daryeel Magazine ku soo gudbinayaa Siddeed qodob oo kaalin libaax ka qaadanaya in ilmahaagu uu noqdo fariid, shakhsiyad xooggan leh: 1. Ilmahaaga ku tababar in uu si habsami ah u raaco nidaam nololeed badqaba oo joogto ah, sida cunto …
Waxyaabaha horseedi kara in ilmahaagu guul ka gaadho tacliinta?
Waalid weliba waxaa uu jecel yahay in ilmihiisu noqdo mid aad ugu fiican tacliinta. Mar kasta oo ilmuhu guul ka gaadho waxbarashadana waxaa uu waalidku dareemaa farxad aan lasoo koobi karin. Jidka dheer ee loo maro tacliintu waa mid u baahan dadaal iyo dulqaad badan.Waa mid u baahan iskaashi dhexmara waalidka iyo ilmihiisa, macalimiinta iyo guud ahaan dugsiga uu ilmuhu …
Page 4 of 4«1234	Nagala Soco:
May 21, 2017	FEMALE LECTURERS IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
May 16, 2017	14 tips for a better marriage
September 13, 2016	Daryeel Magazine	Copyright © 2017 daryeelmagazine.com - All Rights Reserved.